HONEST NEWS AND VIEWS
Preachers and Pandemic - ကပျရောဂါကို ဆငျခွငျခွငျး (၂)
Preachers တရားဟောဆရာတှကေ ကိုယျ့အသိုငျးအဝနျးကို သတိပေးစရာ၊ ထိနျးသိမျးစရာတှေ ရှိပါတယျ။
၁။ စညျးကမျးရှိတဲ့ လူ့အသိုငျးအဝိုငျး ဖွဈဖို့ လိုပါတယျ။
ဆိုရှယျမီဒီယာမှာ တှသေ့မြှကို တခြို့က ရှဲနတေယျ။ မူလပွောတဲ့သူ ဘယျသူမှနျးမသိ။ ဘယျလောကျ တတျကြှမျးနားလညျလဲ မသိ။ စိတျစတေနာ မှနျရဲ့လား မသိ။ တှသေ့မြှ ရှဲနပေုံက ဆယျကြျောသကျမလေးက မကျြလုံးခငျြး ဆုံသမြှ ရငျခုံနသေလိုဖွဈနတေယျ။ အဲဒီတော့ မဆနျးစဈဘဲ ဖစျေ့ဘှတျသုံးရငျ ကွာတော့ စိတျပူလာမယျ။ ကွောကျလာမယျ။ စိတျမငွိမျရငျ အလှဲအမှားတှေ ဖွဈတတျပါတယျ။
စကားတခှနျး ကွားဖူးပါတယျ။ "ကိုယျက ကားဆရာ မဟုတျရငျ၊ ခရီးသညျတှေ ဘယျမှာ ဆငျးရမယျ ဆိုတာ မပွောပါနဲ့" တဲ့။ မွငျယောငျကွညျ့ပါ။ အဝေးပွေးကားတစီးပျေါမှာ၊ ခရီးသညျတှကွေားမှာ လူတယောကျက ခရီးစဉျကို အရမျးစိတျလှုပျရှားနတေယျ။ လမျးကွောမသိဘဲ၊ "ဟလေူ့၊ ခငျဗြားဆငျးရမယျ့ရှာ ရောကျတော့မယျ၊ ပွငျထား၊ ကြျောသှားမယျ" လို့ ကားပျေါရှိ လူတိုငျးကို ပွောနတေယျ ဆိုပါတော့။ ခရီးသညျတှေ ကမောကျကမ ဖွဈကုနျတော့မှာပါပဲ။ အဲဒီတော့ ကိုယျက ဆရာဝနျမဟုတျရငျ ရောဂါအကွောငျး၊ ဆေးအကွောငျးတှေ သိပျမပွောသငျ့ဘူး။ ဆရာဝနျတှဆေိုရငျလညျး တယောကျနဲ့တယောကျ အယူအဆ မတူကွတော့ ဘယျဟာ ပိုကောငျးမလဲလို့ စဉျးစားဖို့လိုပါသေးတယျ။
၂။ ကိုယျကိုယျတိုငျက အဆိုးမွငျစိတျ ရှိမနသေငျ့ဘူး။
ကိုဗဈရောဂါသတငျးကွားရတာနဲ့ တပွိုငျနကျ နောကျတပတျ ဆနျးဒေးမှာ ကိုဗဈနဲ့ပတျသကျပွီး တရားစဟောကွပါတော့တယျ။ မဟောတဲ့ဆရာ သိပျရှားပါတယျ။ အမြားစုက အခကျြအလကျ မရှာဖှေ၊ မလလေ့ာဘဲ ခံစားခကျြနဲ့ ဟောတတျပါတယျ။ အဆုံးသတျမှာတော့ ကပျရောဂါတှဖွေဈနပွေီ၊ သခငျဘုရားကွှလာတော့မယျ၊ ဘေးဒဏျကွီးကာလ ရောကျတော့မယျ၊ အသငျ့ပွငျကွလို့ နိုးဆျောကွတယျ။ ဒါဟာ ကမျြးစာကို သခြောမလလေ့ာဘဲ ကိုယျ့ရဲ့အတှငျးစိတျမှာ အဆိုးမွငျအခံရှိတဲ့သူ - pessimist ဖွဈနတောပါ။
စဈပှဲတှေ၊ သဘာဝဘေးဒဏျတှေ၊ ကပျရောဂါတှဟော ကမ်ဘာဉီးကတညျးက ရှိခဲ့ပါတယျ။ ကမ်ဘာပျေါမှာ စဈပှဲမရှိတဲ့နှဈ၊ သဘာဝဘေး မရှိတဲ့နှဈ၊ ရောဂါဘယ မရှိတဲ့ နှဈကာလဟာ မရှိသလောကျပါပဲ။ တနရောမှာတော့ ရှိနစေမွဲပါပဲ။ အပွဈကွောငျ့ ကြိနျခွငျးအမဂျလာ ခံစားနရေတဲ့ ကမ်ဘာလောကကွီးရဲ့ သဘာဝပါ။ ဘေးဒဏျကွီးကာလမှာ ကပျရောဂါ၊ စဈပှဲ၊ သဘာဝဘေးဏကျတှေ မြားတာ မှနျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ယုံကွညျသူက ဘေးဒဏျကွီးကာလမှာ ဖွတျသှားဖို့ မဟုတျဘူး။ ခြီဆောငျခွငျးမှာ ပါသှားဖို့၊ သိမျးဆညျးခံရဖို့ပါ။ ဒါကို တခြို့က သူတို့နိုးနိုးကွားကွားရှိနတေယျဆိုတဲ့သဘောနဲ့ နောကျဆုံးသောကာလရောကျတော့မယျလို့ အလှဲ‌ပွောကွတာပါ။ Dr. John R. Rice ပွောတဲ့စကားလေးက မှတျသားစရာကောငျးပါတယျ။ "ယုံကွညျသူက နိမိတျလက်ခဏာ signs တှကေို ကွညျ့နရေမှာ မဟုတျဘူး၊ ကယျတငျရှငျ Savior ကို မွျောလငျ့နရေမှာ" လို့ ဆိုပါတယျ။
၃။ အခွအေနနေဲ့ အခြိနျအခါကို နားလညျဖို့ လိုတယျ။
"ကာလအခြိနျတို့ကို နားလညျ၍ ....... အဘယျသို့ပွုရမညျကို သိတတျသော .... ဣသခါအမြိုးသား (၅ ရာ ၁၂: ၃၂)
ကပျရောဂါကို တှကွေုံ့နရေခြိနျမှာ ဘာတှေ လုပျသငျ့သလဲဆိုတာ သိရပါမယျ။
(က) ဘာအကွောငျးကွောငျ့မှ လူစုလူဝေး မလုပျသငျ့တာကို သတိထားရပါမယျ။ သာရေး၊ နာရေးမှအစ၊ ပညာရေး၊ နိုငျငံရေး၊ ဘာသာရေး၊ ဘာအရေးကွောငျ့မှ လူစုလူဝေးမလုပျသငျ့တာကို သတိထားရပါမယျ။ တခါတလေ မာနတျကမြား တမငျနိုးဆျောနသေလား မှတျရတယျ။ ကပျရောဂါကာလမှာ ခဏခဏ လူစုဝေးမိတတျကွပါတယျ။
(ခ) ကိုယျခံအားကောငျးဖို့ လိုခြိနျ၊ ကောငျးကောငျးမှနျမှနျ စားနိုငျဖို့ လိုခြိနျ၊ ပေးဝငှေရမယျ့အခြိနျမှာမှ တခြို့က အစာရှောငျဖို့ တိုကျတှနျးနကွေတဲ့သူတှကေိုလညျး တှရေ့တယျ။ နညျးနညျးတော့ လှဲနတေယျ။ ဣသရလေလူမြိုးတှေ စဈတိုကျနရေလို့ မောနခြေိနျမှာ အနီးအနားမှာ ပြားရညျအလြံပယျ ပေါနပေမေယျ့ စဈပှဲမပွီးမခငျြး ဘာမှ မစားရဘူးလို့ အမိနျ့ထုတျတဲ့ ဘုရငျ့သား အာဗရှလုံလို ဖွဈနတေယျ။ သကျသကျမဲ့ နှောကျယှကျသလိုဖွဈပွီး ပိုပငျပနျးကွ၊ ဒုက်ခရောကျကွတာပေါ့။ အလကားနရေငျး စိတျအားကွီးကွောငျးပွတာ မကောငျးပါဘူး။ ဒါကို ကမျြးစာက vain glory - အခညျြးနှီးသော ကြျောဇောခွငျး၊ အလကား နာမညျကွီးခငျြတာ လို့ ပွောပါတယျ။ မလုပျကွပါနဲ့။
၄။ တတျနိုငျသမြှ ကူညီရမယျ့အခြိနျ ဖွဈပါတယျ။
အဟာရရှိအောငျ ကောငျးကောငျးစားပါလို့ ပွောနပေမေယျ့ ဆငျးရဲတဲ့သူက ဘာစားပါ့မလဲ?
ကနျြးမာအောငျ ဂရုစိုကျနျော ဆိုပမေယျ့ သူကိုယျတိုငျ မလုပျနိုငျ မကိုငျနိုငျသူက ဘယျလို ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ဘယျလို ပွုစုပါ့မလဲ?
"ညီအကိုနှမတို့သညျ အဝတျအခညျြးစညျးရှိ၍၊ နတေို့ငျးစားရသော အစာ မရှိသောအခါ၊ သငျတို့တှငျ တစုံတယောကျသောသူက၊ ငွိမျဝပျစှာ သှားကွလော့။ နှေးကွလော့။ ဝကွလော့ဟုပွောလကျြ၊ သူတို့ကိုယျနှငျ့တျောလြျောသော အသုံးအဆောငျကို မပေးဘဲနလေငျြ အဘယျအကြိုးရှိသနညျး။" ယာကုပျ ၂: ၁၅- ၁၆။
ဆရာတှကေ ဒါကို မနေ့သေလား? အသငျးတျောက ဒါကို မနေ့သေလား? သတိရရမယျ့အခြိနျပါ။
Posted by Eagle News at 11:26 AM No comments:
People and Pandemic - ကပျရောဂါကို ဆငျခွငျခွငျး
လူအမျိုးမျိုး ဆင်ခြင်ပုံ၊ တုန့်ပြန်ပုံ အမျိုးမျိုးပါပဲ။
တချို့က ခပ်ပေါ့ပေါ့ပဲ။ "ကိုဗစ်"" ကို "ငဗစ်" လို့တောင် ပြောင်လှောင် ခေါ်ကြတယ်။ အစပိုင်းမှာ ကိုဗစ်နဲ့ပါတ်သက်လို့ ဟာသအမျိုးမျိုး ထွက်လာတယ်။ ပညာပေး သီချင်းတွေလည်း ပေါပေါပဲပဲ ထွက်လာတယ်။ တချို့က အဲဒီထဲက သီချင်းတပုဒ်ကို ဖုန်း Ring tone အဖြစ်တောင် သုံးလာတယ်။ တကယ်တော့ Covid 19 က အသံကြားရုံနဲ့ကို ကြောက်စရာပါ။ ဒီလိုသီချင်းတွေလည်း မကြားနိုင်ပါ။ ပျော်စရာမှ မဟုတ်တာ။
အစပိုင်း သတင်းကြားခါစမှာကို အမေရိကားနဲ့ ဥရောပမှာ အသေအပျောက် အရမ်းများနေတယ်။ ဗြိတိန်မှာ တော်ဝင်မိသားစုရဲ့ ချားစ်မင်းသား ပိုးကူးစက်ခံရတယ်။ ကူးစက်ခံရသူများလွန်းလို့ ယာယီဆေးရုံတွေ အမြန်ဆောက်ကြရတယ်။
ဒီလောက်ကြောက်စရာကောင်းနေပေမယ့် တချို့က ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတာထက် ဘာကြောင့်ဖြစ်သလဲဆိုတာကို ပိုစိတ်ဝင်စားနေခဲ့ကြတယ်။ ဒါကြောင့်မေးခွန်းတွေ မေးခဲ့ကြတယ်။
၁။ သဘာဝအရ လင်းနို့၊ ခွေး စတဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေမှ ကူးစက်တာလား?
တကယ်တော့ ဒါတွေက ဂျင်းသီတင်းတွေ ထွက်လာတာ။ အာရုံလွှဲဖို့ ကြိုးစားတာ။ အရေးထဲ တချို့သပ်သပ်လွတ်သမားတွေက အသားငါးစားရင် ဒီလိုရောဂါဆန်းတွေ ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ လော်လိုက်ကြသေးတယ်။ တကယ်တော့ ဒါက ဆေးပညာရှင်တွေရဲ့ အလုပ်ပါ။ သူတို့ အဖြေရှာပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်က ဆေးပညာရှင် မဟုတ်ရင် ဒါကို ဆုံးဖြတ်ဖို့က ကိုယ့်အလုပ် မဟုတ်ဘူး။
၂။ လူလုပ်တဲ့ ဇီဝလက်နက်လား?
တရုတ်ပြည်က စစ်ဖြစ်လို့ တရုတ်အကြံလားဆိုပြီး သံသယ ရှိခဲ့ကြတယ်။ အစက စဖြစ်တဲ့ မြို့ကို အစွဲပြုပြီး "ဝူဟန်" ဗိုင်းရပ်လို့ ခေါ်ခဲ့တယ်။ မကြာခင်ပဲ တရုတ်ပြည်ကို အပြစ်တင်မှာစိုးလို့ "Covid 19" လို့ ကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးက ပြောင်းခေါ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် သမတ ဒေါ်နယ်ထရန့်က တမင်ပဲ "China virus" လို့ ခေါ်လိုက်တော့ သူ့ရန်သူတွေက "ဒါက အမုန်းတရား၊ လူမျိုးရေး အစွန်းရောက်" လို့ ဝိုင်းပြီး တိုက်ခိုက်လိုက်ကြတယ်။ ဒါကို ဟုတ်မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ဖို့က ထောက်လှမ်းရေးနဲ့ နိုင်ငံရေးသမားက ဆုံးဖြတ်ရမှာပါ။ အချိန် လိုကောင်း လိုမှာပါ။ စုံစမ်းရဦးမှာကိုး။
ဒါဆို ဘာပဲ စဉ်းစားလို့ ရနိုင်မလဲ?
သူက လေထဲမှာ လွင့်ပျံနေပြီးတော့ ကူးစက်တာ မဟုတ်ဘူးလို့ ဆေးပညာရှင်တွေက ဆိုတယ်။ အနေနီးမှ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းကနေ ကူးတယ်။ အဲဒီတော့ လူစုလူဝေးကို ရှောင်ရမယ်။ Social Distance လုပ်ရမယ်။ "Socially Distanced, But spiritually Connected" လို့ အကြံပေးကြတယ်။ "စိတ်ပေါင်း၊ ကိုယ်ခွါ" ပေါ့။ လူစုလူဝေးကို ရှောင်ပါဆိုတော့ ဘာအကျိုးဆက်တွေ ဖြစ်လာမလဲ?
၁။ ပညာရေးမှာ ကျောင်းတွေ၊ တက္ကသိုလ်တွေ ပိတ်ထားရဖို့ များသွားပြီ။
စာသင်တာ၊ ပညာသင်တာ ကောင်းပေမယ့် ပညာနဲ့ တွဲပါလာတတ်တဲ့ ပညာမာနဟာ မကောင်းလှဘူး။ အခုတော့ အ‌ခြေအနေအရ တချို့အရသာလေးတွေ လျော့ရတော့မယ်။ တက္ကသိုလ်ကျော်းတော်ကြီးမှာ ပညာရတနာတွေ ရှာဖွေဆည်းပူးနေတယ်၊ ငါဟာ ပညာတတ်ဖြစ်တော့မယ် ဆိုတဲ့ ဖီလင်လေး လျှော့ရတော့မယ်၊ ပညာမာနရဲ့ အရသာလေး ပျက်တော့မယ်။ အဲဒီတော့ လူစုလူဝေး မဟုတ်ဘဲ ဘယ်လို ပညာသင်မလဲ? ကျောင်းမတက်ဘဲ ဘယ်လို ပညာလေ့လာမလဲ? အခြေအနေက ရှိနေပါပြီ။ အင်တာနက်က လမ်းဖွင့်ပေးနေပါပြီ။ အင်တာနက်ကနေ စာသင်ရမယ်၊ လေ့လာရတော့မယ်။ ဒါကို အများစုက မပြောင်းချင်သေးဘူး။ ကျောင်းသွားတက်မှ၊ ဆရာနဲ့ သင်မှ ဆိုတဲ့ နည်းဟောင်းလေးကို ဖက်တွယ်နေချင်ကြတယ်။ "ကျွန်တော့ကလေးက အဖေနဲ့အမေကို မကြောက်ဘူးဗျ၊ သူ့ဆရာမမှ ကြောက်တာ။" ဆိုတဲ့ နည်းဟောင်းကြီးကို ပြောင်းပစ်၊ ထားပစ်ခဲ့ရမှာ။ အဲဒီတော့ အခြေအနေအရ အိမ်ကနေ စာသင်တဲ့ခေတ်ကို သွားကိုသွားရတော့မှာပါ။ အဲဒီတော့ ကိုဗစ်ကြောင့် ပညာရေးဟာ ပြောင်းကို ပြောင်းရတော့မှာပါ။
၂။ နိုင်ငံရေးမှာလည်း လူစုလူဝေးနဲ့ ဆန္ဒပြတာ၊ လူစုလူဝေးနဲ့ မိန့်ခွန်းပြောတာတွေ လျော့ရပါတော့မယ်။
ဒါပေမယ့် လူ့သဘာဝကြောင့် ထင်တယ်။ မလိုတာကို လုပ်ချင်တော့ ကိုဗစ်အစပိုင်းက ကမ္ဘာတဝန်းမှာ ဆန္ဒပြပွဲတွေ ပိုများလာခဲ့တယ် ထင်ရတယ်။ နိုင်ငံရေးအရ မကြေနပ်တာကို လူစုလူဝေး မလုပ်ဘဲ တခြားနည်းနဲ့ ဆန္ဒပြ။ ထုတ်ဖေါ်ကြရမှာပါ။
ဒီနေရာမှာ အမေရိကန်ပါတီကြီးနှစ်ခု အယူအဆ မတူတာကိုလည်း တွေ့ရတယ်။ ဒေါ်နယ်ထရန့်က ကိုဗစ်ပိုးဟာ လေဟာပြင်မှာ ကူးဖို့မလွယ်ဘူး။ ဒါကြောင့် လေဟာပြင်မှာ Mask တပ်ဖို့ မလိုဘူး။ အလုံပိတ်အခန်းတွေ၊ ကုန်တိုက်ကြီးတွေ၊ စားသောက်ဆိုင်၊ ရုံးခန်းတွေရဲ့ အတွင်းမှာသာ တတ်ရမယ်လို့ ဆိုတယ်။ လေသာတဲ့ပြင်ပမှာ မလိုဘူးလို့ ဆိုတယ်။ ဒါကို ဂျိုးဘိုင်ဒန်တို့က အခွင့်ကောင်းယူပြီး ဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာ တယူသန်၊ ဆေးပညာရှင်တွေ၊ သိပ္ပံပညာရှင်တွေကို ပစ်ပယ်တယ်လို့ ဂျင်းထည့်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ စကားစစ်ထိုးပွဲမှာ ဒေါ်နယ်ထရန့်က အိပ်ကပ်ထဲက Mask ကို ထုတ်ပြပြီး လိုရင်တပ်ဖို့ ဆောင်ထားပါတယ်လို့ ပြန်ပြောခဲ့တယ်။
ဒီတိုင်းပြည်မှာလည်း ဘယ်အစိုးရတက်တက် အောက်ခြေမှာကို အာဏာရူးက အများသားလား။ သူတို့ချတဲ့ စည်းကမ်း မလိုက်နာရင် ဒဏ်ရိုက်မယ်ဆိုတာချည်းပဲ။ လမ်းပေါ်မှာ ဆိုင်ကယ်နဲ့သွားရင်လည်း mask မပါရင် ဒဏ်ရိုက်တယ်။ တကယ်လိုတာက အလုံပိတ် ဆိုင်ခန်းတွေ၊ ရုံးတွေမှာ ဂရုစိုက်ဖို့ လိုတာ မဟုတ်လား? ဒါပေမယ့် နားမလည်ဘဲ အာဏာပဲပြတတ်သူတွေ လူကြီးဖြစ်တဲ့ ခေတ်တိုင်းမှာ သည်းခံနေရတာပါပဲ။
၃။ ဘာသာရေးမှာ ဘုရားကျောင်းမှာ စုဝေးဝတ်ပြုတာကို သတိထားရတော့မယ်။
အရင်ကတော့ ဘုရားကျောင်းမှန်မှန်မတက်ရင် ဘုရားတရားအားနည်းတယ်လို့ သတ်မှတ်ခဲ့ကြတယ်။ ဦးဆောင်သူတွေ အားထုတ်ရင် အားထုတ်သလို အတိုင်းအတာ တခုစီ အောင်မြင်ခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီတော့ လူစုတာ ခေတ်စားလာတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘုရားသခင့် စိတ်တော်နဲ့ တွေ့ရဲ့လား ဆိုတာတော့ ဆန်းစစ်စရာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာရေးက ကိုယ်ထင်ရာ၊ စိတ်ကြေနပ်ရင်ပြီးရော လုပ်ရတာမျိုး မဟုတ်ဘူးလေ။ အလေ့အလာ၊ အနေအထိုင်တွေ ပြောင်းဖို့ လိုပြီပေါ့။
ဒါပေမယ့် တချို့က ဒါကို သတိမထားမိဘူး။ ဇွတ်တိုးကြတယ်။ လူမစုရဆိုတဲ့ အစိုးရအမိန့်ကို နားထောင်မလား? ဘုရားသခင့်စကား နားထောင်မလားလို့ ဆင်ခြေပေးကြတယ်။ အမှန်က အခြေအနေကို နားမလည်တာ။ လူ့လောကမှာ သဘာဝရဲ့စည်းကမ်း - Principle လေးတွေ ရှိတယ်။ လူကနေတဆင့် ကူးနေတော့ လူစုရင် ပိုကူးမှာပေါ့။ ဒီစည်းကမ်း Principle ကို ဖေါက်ရင် အုပ်စိုးစူ သမတ၊ ဝန်ကြီးချုပ်ဟာ သက်တော်စောင့်တွေကြားက ထိပါတယ်။ ဘာသာရေးသမားလည်း တရားစကား အကွာအကွယ်ကြားက ထိပါတယ်။ တခါတရံမှာ တချို့နိုင်ငံရေးသမားဟာ လေပစ်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ယူသွားတာ ရှိသလို၊ တချို့ဘာသာရေးသမားကလည်း လက်တွေ့လူ့ဘဝနဲ့ ကင်းကွာပြီး အာကာမှာ ဝဲနေတတ်တယ်။
စီလီကွန်ဗဲလီးမှာ ထိပ်တန်းသင်းအုပ်ဆရာတယောက် ရှိတယ်။ သူတို့ပြည်နယ်က လူစုဝေးခွင့် တားမြစ်ထားတယ်။ သူက လက်မခံဘူး။ ဘုရားကျောင်းမှာ လူစုတယ်။ ပြည်နယ်အစိုးရက ဒဏ်ရိုက်တယ်။ ဒေါ်လာ သောင်းချီ ပေးရတယ်။ အခန်းထဲ လူမစုရတော့ ကျောင်းဝိုင်းထဲမှာ ကားတွေပေါ်ကနေ တရားနာကြတယ်။ အာမင်ထူးချင်လာရင် ဟွန်းတီးလိုက်ကြတယ်။ ဒါမျိုးတွေ မြင်ရကြားရရင် မရီရင်တောင် ပြုံးမိကြတာပါပဲ။ နည်းနည်းတော့ များသွားပြီလို့ ထင်စရာပါပဲ။ သူက တော်သေးတယ်။ တချို့က ဒေါ်လာ သန်းနဲ့ချီအောင် ဒဏ်ကြေးပေးကြရတယ်။ တချို့ ထောင်ကျတယ်။ သူတို့ဖက်က ပြန်ပြောတာက ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေ၊ ရုပ်ရှင်တွေ၊ သီရက်တာတွေကိုတော့ ဖွင့်ခွင့်ပြုတယ်။ ဘာသာရေးကျတော့ ပိတ်တယ်လို့ ဆိုတယ်။ ဒါပေမယ့် ပေးလိုက်ရတဲ့ အဲဒီဒဏ်ကြေးငွေတွေကို ကိုဗစ်ဝေဒနာခံစားနေရတဲ့ တခြားဆင်းရဲတဲ့ တိုင်းပြည်ကလူတွေကို ကူရရင် ပိုကောင်းမှာပါ။ တကယ်တော့ သူတို့ဟာ ဘာသာရေးယုံကြည်မှုနဲ့ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးကိုပဲ တွေးနေရင်း တခြားဘဝတွေကို မေ့နေကြတာပါ။
Posted by Eagle News at 8:34 AM No comments:
Labels: Health, Politics, ကနျြးမာရေး, နိုငျငံရေး
အာဏာ အကြောင်း - တပိုင်းတစ - (အာဏာ အကွောငျး - တပိုငျးတစ)
ဗာဗုလုန်ပြည်ရဲ့ ရှင်ဘုရင် နေဗုခ နေဇာက ထူးဆန်းတဲ့ အိပ် မ က် ကို မ က်တယ်။ အဲဒီ အိပ် မ က် က ကမ္ဘာ့ရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး ပုံစံတွေကို ဘုရားက ကြိုတင် နိမိတ်ပေး ပြောပြတာ ဖြစ်တယ်။ (ဒံယေလ အနာဂတ္တိကျမ်း)
အိပ် မ က် မှာ ရုပ်တုအကြီးကြီး ရှိတယ်။
၁။ ခေါင်းပိုင်းက - ရွှေ
- ဘေဘီလွန် နိုင်ငံတော် - B.C 606 - 539 - သက်ဦးဆံပိုင် ဘုရင်စနစ်
၂။ ရင်ဘတ်နဲ့ လက် မောင်း - ငွေ
- ပါးရှား နိုင်ငံတော် - B.C 539 - 331 - စည်းမျည်းခံ ဘုရင်စနစ်
၃။ ဝမ်းဗိုက်နဲ့ ပေါင် - ကြေး
- ဂရိ နိုင်ငံတော် - B.C 331 - 323 - စစ်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်
၄။ ခြေတံနဲ့ ခြေဖျားပိုင်း - သံနဲ့ သရွတ် (ဘိလပ်မြေ)
- ရောမ နိုင်ငံ - B.C 322 -A.D 476 နဲ့ အနာဂတ်ကာလ
ခရစ်ယာန်ကျမ်းစာ အယူအဆအရ လူတွေ အုပ်ချုပ် အာဏာရနေတာဟာ ဘုရား အခွင့်ပေးထားလို့ ပါ။ နောက်ဆုံးမှာ ရုပ်တုကို လူ့လက်ဖြင့် မလုပ်တဲ့ ကျောက်တုံးတတုံးက ထိခိုက်ပြီး ရုပ်တု ပြိုလဲမယ်။ ဆိုလိုတာက ဘုရားကိုယ်တိုင် အုပ်ချုပ် အာဏာသိမ်းပြီးမှ ကမ္ဘာကုန်မယ်။ ဒီကြားကာလမှာ လူတွေ အုပ်ချုပ်နေတယ်။ သတိထားစရာက .....
၁။ အာဏာက တဖြည်းဖြည်း ကျလာတယ်။ ရွှေ၊ ငွေ၊ ကြေးကနေ သံနဲ့ သရွတ် အထိ။ မှိန်လာတယ်။
၂။ လူတွေရဲ့ နောက်ဆုံးအုပ်ချုပ်ရေး စနစ်ဟာ ဒီမိုကရေစီစနစ် လို့ ​ဆိုနိုင်တယ်။
၃။ ပြည်တွင်း စစ်အုပ်ချုပ်ရေးမှာ ပထမဆုံးဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟာ အာဏာရှင် အပြည့်အဝ၊ သူတယောက်တည်း၊ တခြားသူ မရှိ။ ဒုတိယက သူနဲ့အတူ ခရိုနီတွေ မွေးလာရတယ်။ တတိယက အခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့။ ပါဝါက တဖြည်းဖြည်း ကျလာတယ်။
၄။ ဒီမိုကရေစီဟာ မတူတဲ့အရာတွေ (သံနဲ့သရွတ်) ပေါင်းထားတယ်။ တကယ် တသားတည်းတော့ မဖြစ်ဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီမိုကရေစီဟာ unity in diversity - "မတူဘဲ ညီရတာ" ဆိုတော့ နေလို့ရရုံ သည်းခံပေါင်းကြရတာမျိုး ဖြစ်တယ်။
အဲဒီလို နေတတ်ဖို့လည်း သင်ယူကြရဦးမယ်။ အခု အတူဆန္ဒပြပေမယ့် တယောက်နဲ့တယောက် အရာရာမှာ အယူအဆ၊ အကြိုက် တူကြတာ မဟုတ်ဘူး။ ဆန္ဒပြလူငယ်တချို့က အဆိုတော်လေးကို ထောက်ခံတာ မြင်ရတုန်းက မျက်ခုံးပင့်မိတယ်။ စစ်အာဏာရှင်ကို တော်လှန်နေတုန်းမှာ လူလတ်တွေက ခရိုနီကို လော်ဘီ လုပ်တော့ နှုတ်ခမ်းရွဲ့အောင် မဲ့မိတယ်။ ဒီမိုကရေစီရချင်တဲ့ လူကြီးတချို့က စစ်လော်ဘီရဲ့ ပို့စ်တွေကို ဘုမသိ ဘမသိ ရှဲတော့ ဘာထူးသလဲ၊ စိတ်ရင်းက အတူတူပဲ ဆိုပြီး ခေါင်းခါမိတယ်။
အဲဒီတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီမိုကရေစီခေတ် ရောက်တော့မယ်။ အချိန်တန်ပြီလေ။ ဒါပေမယ့် အခြေအနေသစ်မှာ အများကြီး သင်ယူစရာတွေ ရှိပါတယ်။
- စိတ်ရင်းကောင်းအောင် ကိုယ့်စိတ်ကို ကောင်းအောင် မပြုပြင်ရင် ဘယ်ခေတ်ရောက်ရောက် လူကောင်း မဖြစ်ဘူး။
- ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း နေချင်တဲ့ စိတ်ကလေး မရှိရင် ဒီမိုကရေစီခေတ်မှာ ဆန္ဒတွေ ဆက်ပြနေလိမ့်ဦးမယ်။
- လေ့လာသင်ယူလိုစိတ် မရှိရင် ဘယ်တော့မှ ပညာ တိုးလာမှာ မဟုတ်ဘူး။
- အလုပ်ကြိုးစားချင်စိတ် မရှိရင် ကိုယ်နေတဲ့ အိမ်ကလေးကနေ တိုက်အမြင့်ကြီးကို လှမ်းကြည့်ရင်း နောင်ဆိုရင် မင်းထက်သာမယ် လို့ ပြောလည်း တကယ်ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူး။
Posted by Eagle News at 10:21 AM No comments:
Labels: Politics, နိုငျငံရေး
အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ သစ်ပင်တွေ ခုတ်ပစ်တဲ့အတွက် တောပြုန်းလာတယ်။ မြစ်ကြီးနားကနေ မန္တလေးကို ရထားစီးလာတဲ့အခါ အစပိုင်းမှာ တောအုပ်တွေ စိမ်းစိမ်းစိုစို တွေ့တယ်။ နောက်ပိုင်း ဦးအောင်ဇေယျတို့ ဇာတိမြေကို ရောက်တော့ တောပျောက်သွားပြီး။ ဘရိတ်မအုပ်ဘဲ စစ်ပဲတိုက်တာလေ။ စစ်ကိုင်း၊ မန္တလေးနား ရောက်တော့ ဆူးပင်၊ ထနောင်းပင်ပဲ အတွေ့များတယ်။
အညာဟာ နွေမှာ အပူဒဏ်ကို သေလုအောင်ခံရတယ်။ သစ်ပင်ပြန်စိုက်ဖို့ အရေးတကြီး လိုနေပြီ။ ဒါပေမယ့် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မလုပ်ဖြစ်ကြဘူး။ တောထဲက သစ်ပင်တော့ ထားပါဦး။ ကိုယ့်ခြံထဲက သစ်ပင်ကို နွေရာသီ နေပူထဲမှာ ခုတ်တဲ့ အိမ်နီးချင်းတွေကို မြင်ရတော့ သာမန် မသိရုံမဟုတ်တော့ဘူး။ မကောင်းဆိုးဝါး ဝင်စီးနေသလား ထင်မိတယ်။ ပူပါတယ်ဆိုမှ ရှိတဲ့အရိပ်ကို ခုတ်ပစ်နေတာကိုး။
ကိုယ့်ဝိုင်းထဲမှာ တတ်နိုင်သမျှ သစ်ပင်စိုက်တော့လည်း အနှောက်အယှက်က ရှိတယ်။ ကိုယ့်ကလေးတွေပေါ့။ သစ်ရွက်တွေ ခူး၊ သစ်ကိုင်းတွေ ချိုး။ ဘာရယ်မဟုတ်၊ ဖြတ်သွားရင်း သစ်ရွက်တွေကို လက်ထဲ ဆုပ်ဆွဲ ပွတ်ဆွဲသွားကြတယ်။ ပြီးတော့ လက်ဖဝါးဖြန့်ပြီး သစ်ရွက်တွေ မြေပေါ် ပစ်ချ။ တကယ့်နှမြောစရာ။ "သစ်ပင်လေးတွေ သနားစရာကွာ၊ ကြီးဖို့ အားယူတုန်းမှာ မင်းတို့က အရွက်တွေ လာဆွဲတော့ အပင်ကလေးတွေ နာနေမှာပေါ့၊ ငါတို့လက်ကို လိမ်ဆွဲခံရသလိုပေါ့" လို့ ပြောရ တားရတယ်။
သူတို့ရန်က အေးသွားတော့ ဝိုင်းထဲမှာ သစ်ပင်လေးတွေ စိမ်းစိုလာတယ်။ အရိပ်ကောင်းလာတယ်။ အပူရှိန် သက်သာပြီး အအေးဓါတ်ရလာတယ်။ နေပူထဲကလာသူတွေ ကိုယ့်ဆီရောက်ရင် "အမယ်၊ ဒီနေရာလေးက အေးသားဟ" ဆိုပြီး အေးရိပ်ကလေးကို ခံစားကြ၊ ကြည်နူးကြတယ်။
လူသာမက ငှကျတှလေညျး နားခိုလာတယျ။ သူတို့စားတဲ့ သဈစေ့တှေ မွပေျေါကတြော့ ကိုယျ့ဝိုငျးမှာ မရှိသေးတဲ့ အပငျတှပေါ ပေါကျလာတယျ။ မနကျဆို ခြိုးကလေးတှေ သဈပငျထကျ မှာ ကူတယျ။ ဇရကျလေးတှရေဲ့ အသံကွားရတယျ။ မမွငျဖူးတဲ့ ငှကျတှေ မွငျလာရတယျ။ ပုံစံကတော့ ခိုပဲ။ တကိုယျလုံးစိမျးနတေဲ့ ငှကျကို ကလေးတှနေဲ့အတူ စကားကယျြကယျြ မပွောဘဲ သဈပငျထကျကို အထူးတဆနျး မော့ကွညျ့ကွရတယျ။ အရှယျသေးလှနျးတဲ့ ငှကျကလေးတှလေညျး နှမှော ရောကျလာတယျ။ မိုးရှာတော့ ပွနျပွေးတယျ။ မတှေ့မိတော့ဘူး။ ရှဥ့်ကလေးတှေ အမွီးဖှါးဖှါးလေး၊ ထောငျထောငျထောငျထောငျနဲ့ သဈပငျပျေါမှာ ပွေးကစားတာ၊ လဲသီးခွောကျတှေ ဖေါကျစားတာ တှေ့ရတယျ။ သူတို့ကို ကွညျ့ရမွငျရတာ ပြျောစရာကောငျးတယျ။
ပန်းပင်တွေ ရှိတော့ ပျားကလေးတွေလည်း ရောက်လာတယ်။ ကလေးတွေက ပျားအုံတွေ့ရင် လာပြောတယ်။ "ပျားမဖွတ်နဲ့နော်၊ ပျားမျိုး ပြုတ်နေမယ်၊ နောင် ပျားတွေ ပွါးလာမှ နည်းနည်းပါးပါး ပျားရည် စားပေါ့" လို့ မှာရတယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပျားအုံတွေ များလာပြီ။ ပျားတွေ ပွါးလာပြီပေါ့။
ဒါပေမယ့် အခု မိုးတွင်းရောက်တော့ ညနေခင်းဆို ခြင်က တအားကိုက်တယ်။ မနေနိုင်တော့ သစ်ရွက်ခြောက်နဲ့ မီးကလေး ဖိုကြတယ်။ ဟိုနား တပုံ၊ ဒီနား တပုံပေါ့။ အဆင်ပြေတယ်၊ ခြင်ကိုက် သက်သာတယ်။ ညနေတိုင်း မီးကလေးတွေ ဖိုကြတယ်။ တနေ့တော့ တယောက်က လာပြောတယ်။ "ပျားအုံတွေ မရှိတော့ဘူး။ ညနေတိုင်း မီးဖိုကြတာကိုး။" တဲ့။ "ဟာ" ဆိုပြီး တအံတဩနဲ့ စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်ဖို့ မရည်ရွယ်ခဲ့ဘူး။ လူတွေကတော့ တော်ရုံ မီးခိုးနံ့ကို ခံနိုင်တာပေါ့။ ပျားကလေးတွေက ပန်းရနံ့တွေကို အနံ့ခံတဲ့သူဆိုတော့ အနံ့တွေနဲ့ပါတ်သက်ရင် sensitive ဖြစ်တယ် ထင်တယ်။ အရမ်းသိလွယ်၊ ခံစားလွယ်မယ်။ ကိုယ့်မွှေးတဲ့ မီးခိုးလေးတွေ လေမှာ ဝှေ့ရုံနဲ့ သူတို့ခမျာ နေမရဖြစ်မယ် ထင်တယ်။ မွှေးတဲ့ပန်းရနံ့ကို ခံစားနေကျ ပျားလေးဟာ မီးခိုးနံ့တွေကို မခံနိုင်ဘူး။ Sorry, ပျားကလေးတွေရေ၊ ငါတို့ လက်လွန်သွားပြီ။ မှားသွားပြီ။ ပျားကလေးတွေ ပျံသွားပြီ။
ပြားကလေးတှအေကွောငျး စဉ်းစားရငျ ဆငျတူတဲ့ တခွာအကွောငျးအရာတှေ ဆကျတိုကျ တှေးမိလာတယျ။ မိဘက ပညာတတျစခေငျြလှနျးလို့ အတငျး တိုကျတှနျး ဖိအားပေးခံနရေတဲ့ ကလေးတှေ၊ လူငယျကြောငျးသားလေးတှဟော အစက လူစငျစဈဖွဈပမေယျ့ စာသငျကြောငျးကို သှားထားတော့မှ ကွကျတူရှေးဖွဈရရှာတယျ။
ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ကို အကြောက်လွန် ထိတ်ထိတ်ပြာပြာဖြစ်ပြီး ဥပဒေ၊ အာဏာတွေပြခံရတဲ့ ဒေသအသီးသီးက လူတွေ (တပည့်မှားတော့ ဗျောတီး၊ ဆရာမှားတော့ ဆောရီး။ အမှားလုပ်တာချင်းတူတူ သူ့သားလေးကျ မရိုက်ဘူး ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေ)။ တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့ ဘာစေတနာ၊ ဘာအတတ်ပညာမှ မရှိဘဲ
နိုင်ငံရေးတွေ နေ့တိုင်းပြော၊ နေ့တိုင်းဆဲနေတဲ့ ပြည်သူပြည်သားတွေ။ အမုန်းစကားတွေပြော၊ ပြဿနာ အမြဲရှာနေတဲ့ လူယုတ်မာ အုပ်စုတွေ။ ဒါတွေ မြင်နေ၊ ကြားနေရတော့ Sensitive ဖြစ်တဲ့ ပျားလေးတွေ ပျံပြေးချင်လာမယ်။ တိုင်းပြည်က မီးခိုးမွှန်လာပြီလေ။
နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ လာဖို့ လန့်နေမယ်။ ပျားလေးတွေ ပျံပြေးကုန်မယ်။ သတိမထား၊ မစာနာရင် ပျားကလေးတွေ ပျံပြေးလိမ့်မယ်။
Posted by Eagle News at 12:30 PM No comments:
Why Did The Chicken Cross The Road? ကြက် ဘာကြောင့် လမ်းဖြတ်သလဲ?
နိုင်ငံရေးဟာသပါ။ - နိုင်ငံရေးသမားတွေဟာ အဖြစ်အပျက်တခုတည်းကို မြင်ပုံ၊ ဖြေရှင်းပုံ မတူကြောင်းပြတဲ့ ဟာသပါ။
ကြက် ဘာကြောင့် လမ်းဖြတ်သလဲ?
DONALD TRUMP: ကြက်တကောင် လမ်းဖြတ်ကူးသွားတယ်လို့ အသိုင်းအဝိုင်းတွေက ပြောလာတယ်။ စိတ်ချရတဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းတွေ။ တကယ်စိတ်ချရတဲ့သူတွေပါ။ သတင်းအမှားဖြန့်တဲ့သူတွေကတော့ လမ်းပေါ်မှာ အမှိုက်တွေ ရှုပ်ပွနေလို့ ဖြတ်တာလို့ ရေးကြမယ်။ လမ်းက ကောင်းပါတယ်။ တကယ် လှတဲ့ လမ်းပါ။ လမ်းဘယ်လောက်လှတယ်ဆိုတာ အားလုံးသိကြပါတယ်။
JOE BIDEN: ကြက်က ဘာကြောင့်ဖြတ်သလဲဆိုတော့ ..... အင်း - ကျန်တာတော့ ခင်ဗျားတို့ သိကြပါတယ်လေ။
SARAH PALIN: ကြက်က ဘာကြောင့် လမ်းဖြတ်လဲဆိုတော့ - သေစမ်း၊ အဲဒီကြက်က maverick မားဗရစ်ပဲ။ ဘယ်သူနဲ့မှ မရောတဲ့ကောင်။
BARACK OBAMA: ကျွန်တော် ရှင်းပြချင်တယ်။ ကြက်တွေက ကိုယ့်ဉကိုယ် သဘောကျရင် ကိုယ့်ဉကိုယ်သိမ်း၊ လမ်းဖြတ်ပြီး အညံ့ခံ ဉပေးဖို့ မလိုဘူး။ ဒါပဲ။
AOC: ကြက်တွေကို အတင်း မအုခိုင်းပါနဲ့။ ဒါက လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေရဲ့ လောဘကြောင့် ဖြစ်တာ။ ဉတွေက သူတို့ဟာသူတို့ ဉနိုင်ပါတယ်။
HILLARY CLINTON: ဒီအချက် မှာ သဘောထားတွေ ကွဲနေလို့ ကြက်က လမ်းဖြတ်သွားရတာ။
GEORGE W. BUSH: ကြက် ဘာကြောင့် လမ်းဖြတ်လဲက လုံးဝ အရေးမကြီးဘူး။ သိချင်တာက အဲဒီကြက်က တို့ဖက်အခြမ်းမှာ ရှိသလား၊ မရှိဘူးလား။ တို့လူလား၊ တဖက်လူလား။ ကြားနေလို့တော့ မရဘူး။
DICK CHENEY: ဘယ်မလဲ - ငါ့သေနတ်?
BILL CLINTON: ငါက အဲဒီကြက်နဲ့အတူ လမ်းမဖြတ်ဘူးနော်။
AL GORE: အဲဒီကြက်က ငါ တီထွင်လိုက်တဲ့ကြက်။
JOHN KERRY: ကြက်တွေ လမ်းဖြတ်ခွင့်ရဖို့ ငါ မဲပေးခဲ့ပေမယ့် အခု ငါ သဘောမတူတော့ဘူး။ ဖြတ်မယ့်လမ်းက မှားနေတယ်။ ကြက်တွေရဲ့ အကြိုက်လိုက်လို့ မှားသွားတယ်။ အခုတော့ အဲဒါကို သဘောမကျတော့ဘူး။ ဆန့်ကျင်သွားရတော့မယ်။
AL SHARPTON: ဘာလို့ အကုန်လုံး ကြက်ဖြူတွေချည်း ဖြစ်နေရသလဲ?
DR. PHIL: ပြဿနာက လမ်းဟိုဖက်က ပြဿနာတွေ မရှင်းခင် လမ်းဒီဖက်က ပြဿနာတွေကို အရင်ရှင်းရမယ် ဆိုတာ အဲဒီကြက်က နားမလည်တာပဲ။ ​ပြဿနာတွေ ထပ်မဖြစ်ခင် အခုလက်ရှိပြဿနာကို မရှင်းတာဟာ အလွန်မိုက် မဲတယ် ဆိုတာ နားလည်ဖို့ ပြောပြရမယ်။
ANDERSON COOPER: ကြက်တကောင်ရှိတာတော့ ယုံကြည်စရာ အကြောင်းရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လမ်းဟိုဖက်နဲ့ သတင်းဆက်သွယ်ခွင့် မပေးကြဘူး။
NANCY GRACE: အဲဒီကြက်က လမ်းဖြတ်တာဟာ သူ့မှာ အပြစ်ရှိလို့ပေါ့။ သူ့မျက်လုံးနဲ့ လမ်းလျှောက်ပုံကို ကြည့်ရင် မြင်သာပါတယ်။
PAT BUCHANAN: အဆင်ခြင်ဉာဏ်ရှိပြီး အလုပ်ကြိုးစားတဲ့ အမေရိကန်တွေရဲ့ အလုပ်ကို ခိုးယူဖို့ ဖြစ်မယ်။
DR SEUSS: ကြက်က လမ်းဖြတ်သွားသလား? ဖါးပြုတ်တကောင်ပါ ပါသတဲ့လား? ကြက်က လမ်းဖြတ်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဘာကြောင့်ဖြတ်သလဲတော့ မပြောကြဘူး။
ERNEST HEMINGWAY: မိုးရွာထဲမှာ တကောင်တည်း သေချင်လို့။
GRANDPA: တို့ခေတ်တုန်းကတော့ ကြက်က ဘာကြောင့် လမ်းဖြတ်လဲလို့ မမေးကြဘူးကွ။ ကြက်က လမ်းဖြတ်သွားတယ်လို့ ပြောရင် လုံလောက်ပြီလေ။
ARISTOTLE: လမ်းဖြတ်တယ်ဆိုတာ ကြက်သဘာဝလေ။
ALBERT EINSTEIN: ကြက်က လမ်းကို တကယ်ဖြတ်သလား? ကြက်အောက်က လမ်းကပဲ ရွေ့သွားတာလား?
COLONEL SANDERS: ငါ့ကြက် များ ပျောက်သေးလား?
Posted by Eagle News at 8:45 AM No comments:
အမေရိကန် သမတ ရွေးကောက်ပွဲ နီးလာတာနဲ့ အကြိ်ုက်တွေ အမျိုးမျိုး ရေးလာကြတယ်။ အကြိုက်မတူတာ သဘာဝဆိုပေမယ့် တချို့ရေးတာတွေက သိပ်စိတ်ပျက်စရာ ကောင်းပါတယ်။
ဟိုးအရင် ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက ရေဒီယိုသတင်းဌာနတခုက မေးတော့ အမေရိကားရောက် ကရင်တယောက်က ဖြေတယ်။ “ကျွန်တော်က အိုဘားမားကို မဲပေးမယ်။ သူ့နာမည်မှာ ဘားမားပါလို့” တဲ့။ သမတရွေးမှာလား၊ မွေးဖွါးရာ နိုင်ငံမေးတာလား သိပုံမရသလို ဖြစ်နေတယ်။ တချို့ကလည်း Black မိုလို့တဲ့။ မဲရင်ပြီးရောဆိုရင် မီးသွေးခဲကို သမတခန့်လို့ ရမလား?
တချို့ကလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သမတဖြစ်စေချင်တဲ့ စိတ်နဲ့ရောပြီး မိန်းမသမတ တက်စေချင်တယ်၊ ဟယ်လာရီကို သမတ ဖြစ်စေချင်သတဲ့။ မိန်းမယူတဲ့ကိစ္စမှာသာ ကိုယ်ယူမယ့်သူက မိန်းမဖြစ်ဖို့ နံပါတ် ၁ အရေးအကြီးဆုံးလို့ ထင်တာပဲ။ သမတကတော့ ယောင်္ကျားဖြစ်ဖြစ်၊ မိန်းမဖြစ်ဖြစ် Black ဖြစ်ဖြစ်၊ ဘာဖြစ်ဖြစ်၊ စေတနာမှန်မယ်၊ အရည်အချင်း ရှိမယ် ဆိုရင် အဆင်ပြေတာပါပဲ။
ကဲ ..... အခုတော့ Dr. R. B. Ouellette ရဲ့ Why I'm Voting for Donald Trump ကို ဖတ်ကြည့်ပါဦး။
“တယောက်ကို သမတအဖြစ် မဲထည့်ဖို့ နိုင်ငံရေးတွေ မရေးဖူးပေမယ့် ဒီတခါတော့ ရေးရပါတော့မယ်။ ရီပတ်ပလီကင်ထဲမှာ စပြီး ကြိုက်မိတာကတော့ Scott Walker ပါ။ သူထွက်သွားတော့ Marco Rubio ကြိုက်တယ်။ သူထွက်သွားတော့ Ted Cruz ကြိုက်တယ်။ Donald Trump ကတော့ ၁၇ ယောက်ထဲမှာ နံပါတ် ၁၇ ပဲ။ တခြားသူတွေကို သူ့ထက် ပိုကြိုက်တယ်။
သူက စံပြတော့ မဟုတ်ဘူး။ သူက လူမှုရေးရော ဘာသာရေးမှာပါ ညံ့တဲ့အတွက် သူကို မဲပေးဖို့ ခက်နေသူတွေလည်း ရှိတယ်။ ကျွန်တော့ သဘောကတော့ သမတဆိုတာ စံပြဖြစ်မှ မဟုတ်ပါဘူး။ အသင့်တော်ဆုံးဆိုရင် ရပါပြီ။ William F. Buckley က ချပြဖူးပါတယ်။ နိုင်ခြေရှိတဲ့ ကွန်ဆားဗေးတစ် အဖြစ်ဆုံးလူကို မဲပေးရမယ်တဲ့။
Donald Trump က ကိုယ်ကျင့်တရားမရှိဘူး။ အတ္တကြီးတယ်။ အခွင့်ရေးသမား။ မတည်ကြည်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒါတွေအားလုံးမှာ ဟယ်လာရီ ကလင်တန်လောက်တော့ရှိတယ်။ ကျွန်တောသဘောကတော့ Donald Trump က ညံ့တယ်ဆိုရင် Hillary Clinton က ဆိုးတာ။
1. ဒုသမတလောင်းကို သူက လူကောင်း ရွေးထားတယ်။ Pence က ခရစ်ယာန်၊ တကယ့် ကွန်ဆားဗေးတစ်၊ လူကောင်းတယောက်။ သူ့စကား Trump က ဘယ်လောက် နားထောင်မလဲ မသိပေမယ့် အနားမှာ အကြံပေးနိုင်သူတွေ ရှိနေပြီ။
2. လူ့အသက်ကို တန်ဖိုးထားဖို့ Pro-life အကြောင်းကို Mr. Trump က ပါးစပ်နဲ့တော့ ပြောဖေါ်ရသေးတယ်။ Mrs. Clinton ကတော့ ဆန့်ကျင်ဖက်မှာ တကယ့် Pro-choice သမား။ ကိုယ်ဝန်ဖျက်တာနဲ့ ပါတ်သက်လို့ ပြောရာမှာ ဘာသာရေးအတွေးအခေါ်တွေ ပြောင်းဖို့ လိုသတဲ့။
3. Mr. Trump က စီးပွါးရေးတော့ နားလည်သေးတယ်။ Mrs. Clinton ကတော့ စီးပွါးရေးကို အားမပေးဘဲ စီးပွါးရေးသမားတွေထံက ပိုက်ဆံ ဘယ်လိုယူရမလဲ ဆိုတာပဲ သိတဲ့သူ။ Mr. Trump ကြောင့် စီးပွါးရေး တက်လာနိုင်တယ်။ Mrs. Clinton နဲ့ဆို စီးပွါးရေး မတက်လောက်ဘူး။
4. တိုင်းပြည်ရဲ့ လွတ်လပ်မှုနဲ့ လူတွေရဲ့ အသက်ကို ခြိမ်းခြောက်နေတဲ့ အစ္စလာမ်မစ် အကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့ ရန်ကို Mr. Trump က ပြတ်ပြတ်သားသား ရပ်တည်ပြလိမ့်မယ်။ Mrs. Clinton ဟာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဘဝမှာ မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။
5. Mrs. Clinton ထက် Mr. Trump က တရားလွှတ်တော်ချုပ်ကို ပိုကောင်းအောင် လုပ်နိုင်မယ်။ Mrs. Clinton အာဏာရင် liberal တရားသူကြီးတွေ ခန့်ပြီး လွတ်လပ်မှုကို ပွန်းပဲ့စေလိမ့်မယ်။
အဖြစ်အပျက်တခု ကြားဖူးပါတယ်။ လူဆိုးတယောက်မှာ ညီဖြစ်သူ သေသတဲ့။ ပြစ်မှုအတူ ကျူးလွန်ခဲ့ကြတယ်။ အကိုက သူ့ညီရဲ့ အသုဘမှာ တရားဟောဆရာတယောက် လာပြီး သူ့ညီဟာ သန့်ရှင်းသူ Saint သူတော်စင်လို့ ပြောစေချင်ပါသတဲ့။ ပြောရင် ပြောတဲ့ဆရာကို ဒေါ်လာ တသောင်း ပေးချင်လောက်အောင် စိတ်က ပြင်းပြနေတာပါ။
Catholic priest က No တဲ့။ Presbyterian ဆရာကလည်း No တဲ့။ Baprist ဆရာကတော့ ရှင်းအာင် ပြန်ပြောပြပါဦး။ ခင်ဗျားညီကို သူတော်စင်လို့ ပြောရုံပဲလား? ဒါနဲ့ ခင်ဗျားက ဒေါ်လာ တသောင်း ပေးမှာလား?
Baptist ဆရာက "ကျုပ်ပြောမယ်ဗျာ" တဲ့။ အသုဘမှာ သူပြောတာကတော့ .........
"ဒီလူဟာ ကောက်ကျစ်တဲ့လူဆိုတာ လူတိုင်း သိပါတယ်။ ခိုးတယ်။ လိမ်တယ်။ လူတွေကို လှည့်စားတယ်။ မြို့ထဲမှာ အဆိုးဆုံးထဲက တယောက်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် သူ့အကိုနဲ့ ယှဉ်ရင်တော့ သူက သူတော်စင်ပေါ့။"
Posted by Eagle News at 7:56 AM No comments:
Cancer and Acid ကငျဆာနဲ့ အကျစဈ
ကင်ဆာရောဂါရဲ့ အကြောင်းရင်းကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ နိုဘယ်လ်ဆုရှင် Dr. Otto H Warburg က ကင်ဆာဟာ အဓိကအားဖြင့် အောက်စီဂျင် ပြတ်လတ်လို့ ဖြစ်ရတာလို့ ဆိုတယ်။ အောက်စီဂျင်ပြတ်တော့ ကိုယ်ခန္ဓာမှာ အက်စစ်များလာတယ်။ Dr. Warburg က ကင်ဆာဆဲလ်တွေဟာ anaerobic (အောက်စီဂျင်ကို မစုပ်ယူဘူး) လို့လည်း တွေ့ရှိခဲ့တယ်။ အောက်စီဂျင်များရင် မရှင်သန်နိုင်ဘူး။
သာမန်ဆဲလ်အားလုံးဟာ အောက်စီဂျင် လိုကြတယ်။ ကင်ဆာဆဲလ်တွေကတော့ အောက်စီဂျင် မလိုဘဲ ရှင်သန်နိုင်တယ်။ ဆဲလ်ထဲမှာ အောက်စီဂျင် ၃၅%၊ ၄၈ နာရီကြာအောင် ပြတ်လပ်လာရင် ကင်ဆာ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။
ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ pH levels ကို ထိန်းဖို့ရာ အစားအစာက အဓိကကျပါတယ်။
PH balance, PH မျှခြေဆိုတာ ကိုယ်ခန္ဓာတလျှောက်လုံးမှာရှိတဲ့ ဆဲလ်နဲ့ အရည်မှန်သမျှမှာ အက်စစ်နဲ့ အယ်လ်ကာလိုင်း အချိုးမျှတာကို ခေါ်တယ်။ သွေးရဲ့ pH levels ဟာ အယ်လ်ကာလိုင်း level 7.365 ရှိမှ အသက်ရှင်နိုင်ပါတယ်။ အစားအသောက်ထဲမှာ ဓါတုပစ္စည်း နဲ့ သကြား၊ အရောင်ချွတ်ထားတဲ့ အစေ့အနှံ၊ မျိုးရိုးဗီဇပြုပြင်ထားတဲ့ အသားငါးတွေကြောင့် အက်စစ်များနေနိုင်ပါတယ်။ ဒါက အက်စစ်မျှခြေ ပျက်စေပါတယ်။ မျှခြေပျက်ရင် ဆဲလ်တွေ အလုပ်လုပ်ပုံကို ထိခိုက်စေတယ်။ အက်စစ်များတာ ကြာလာရင် ကင်ဆာ၊ နှလုံးသွေးကြော၊ ဆီးချို သွေးချို၊ အရိုးပွနဲ့ ရင်ထဲပူလောင်တဲ့ ရောဂါတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အက်စစ်များတာ ကြာရင် အိုမင်းရင့်ရော် လာမယ်။ Robert O. Young က သူ့ရဲ့စာအုပ် The pH Miracle မှာ ကျမ်းမာရေးပြသနာ အများစုဟာ အက်စစ်များလို့ ဖြစ်ရတယ်လို့ ဆိုတယ်။ ကပ်ပါးတွေ၊ မကောင်းတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေ၊ ဗိုင်းရပ်စ်တွေက အက်စစ်များရင် မြန်မြန်ကြီးထွားကြလို့ ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် အယ်လ်ကာလိုင်းကတော့ ဘက်တီးရီးယားနဲ့ တခြားအရာတွေကို ထိန်းထားနိုင်တယ်။
ဒါကြောင့် pH balance - pH မျှခြေကို ထိန်းခြင်းဟာ ကျန်းမာရေးအတွက် အရေးပါပါတယ်။
(LIVING TRADITIONALLY မှ)
Posted by Eagle News at 9:31 AM No comments:
Labels: Health, ကနျြးမာရေး
Unclog YourBlood Vessels and Lower Your Blood Pressure သွေးတိုးရောဂါ
သွေးထဲမှာ ကိုလက်စ်ထရောတွေ စုဝေးနေပြီး သွေးလှည့်ပတ်မှုကို ပိတ်ဆို့စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ အသက်အရွယ်နဲ့ မျိုးရိုးကြောင့်လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဆီးချို၊ သိုင်းရွိုက်အကြိတ်၊ အဝလွန်ခြင်း၊ ကျောက်ကပ်နဲ့ အသည်းရောဂါတွေကြောင့်လည်း သွေးကြောတွေ ထုံးနေတတ်ပါတယ်။ ဖိစီးမှု stress ကလည်း လူသိများတဲ့ အကြောင်းရင်းတခုပါပဲ။ အဲဒီလို စိုးရိမ်စရာတွေ မရှိရင် သွေးတိုးနဲ့ ကိုလက်စ်ထရော များတဲ့ အဖြစ်က လွတ်မယ်လို့ မပြောနိုင်သေးပါဘူး။ ဒါက အဆီများပြီး အမျှင်နဲ၊ အင်တီအောက်ဆီးဒင့်နဲ၊ လိုအပ်တဲ့ အဟာရတွေနဲ့တဲ့ အစားအသောက်တွေကြောင့်လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ နေ့စဉ်ကိုယ်ကာယ လှုပ်ရှားမှုနဲရင်၊ ဆေးလိပ်နဲ့ အရက်သောက်တာများရင်လည်း ဒီဝေဒနာကို ခံစားရတတ်ပါတယ်။
ကိုလက်စ်ထရောနဲ့ သွေးတိုးကို ချတဲ့ဆေးတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီဆေးတွေက ကိုလက်စ်ထရောထုတ်လုပ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့အရာတွေကို ကိုယ်ခန္ဓာက ထုတ်မပေးဖို့ ဖေါ်စပ်ထားတာပါ။ သွေးထဲမှာရှိတဲ့ ကိုလက်စ်ထရောကို တစ်ရှုးတွေက ပြန်စုပ်ယူဖို့လည်း ဒီဆေးတွေက ကူညီပါတယ်။ ဒါမှ သွေးကြောတွေ မထုံးစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုလက်စ်ထရော ချတဲ့ဆေးတွေက အစွမ်းထက်ပေမယ့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေလည်း တွဲပါလာပါတယ်။ အဲဒီဆေးတွေကြောင့် အရမ်းဝလာတတ်ပါတယ်။ ကြွက်သားတွေ နာကျင်တာလည်း ခံစားရတတ်ပါတယ်။ အရေပြားမှာ အနီကွက်တွေပေါ်တာ၊ ဖူးယောင်တာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အစာမချေနိုင်တဲ့ ပြသနာကတော့ အဖြစ်အများဆုံးပါပဲ။ ဒီဆေးတွေကို အသောက်များရင် သွေးထဲမှာ သကြားဓါတ်များလာမယ်။ ဆီးချိုဖြစ်လာနိုင်တယ်။ တခြားဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကတော့ အာရုံကြောပြသနာ၊ အသည်းနဲ့ ကျောက်ကပ် ပျက်စီးတာတွေပါပဲ။
ကိုလက်စ်ထရော များနေရင်၊ သွေးတိုးနေရင် ဆရာဝန်က အခြေအနေဆိုးမသွားဖို့ အပြောင်းအလဲတချို့ လုပ်ဖို့ မပြောဘဲနေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အထူးကုဆရာဝန်ထံက ရနိုင်တဲ့ အကြံပေးစကားကတော့ - - -
= အသီးနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက် မျာများစားပါ။
= အဆီ၊ ဆားနဲ့ သကြား များများပါတဲ့အစားအစာတွေကို လျှော့ချပါ။
= ငါး၊ အစေ့၊ အဆံတို့လို ကျန်းမာရေးနဲ့ညီတဲ့ အဆီမျိုးကို စားပါ။
= နှလုံးသွေးကြောတွေက် လေ့ကျင့်ခန်း မိနစ် ၂၀ လောက် ပုံမှန်လုပ်ပါ။
= ဖိစီးမှု stress ကို လျှော့ချပြီး၊ အိပ်ရေးဝအောင် အိပ်ပါ။
= ဆေးလိပ်နဲ့ အရက်ဖြတ်ပါ။
ရောဂါကြာရှည်နေရင် ဆရာဝန်က ကိုလက်စ်ထရော ချတဲ့ဆေးတွေ ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မလိုအပ်တဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ရလာနိုင်တာကြောင့် တခြားနည်းတွေကို သုံးဖို့ လိုလာပါလိမ့်မယ်။ သွေးကြောပိတ်တာ၊ သွေးတိုးတာအတွက် ရှေးနည်းကောင်းလေး တခုရှိပါတယ်။ တကယ့်ရိုးရိုးလေးပါ။
= ကြက်သွန်ဖြူ ၄ ဥ
= ရှောက်သီးအရွယ်လတ် ၄ လုံး
= ရေနွေး ၃ လီတာ
= ကြက်သွန်ဖြူကို အခွန်ခွါပါ။
= ရှောက်သီးတွေကို ဆေးပါ။ မသန့်သေးရင် အခွံမခွါပါနဲ့။
= ဆေးပြီးမှ ရှောက်သီးတွေကို သေးသေး စိတ်ပါ။
= ဗူးကြီးထဲမှာ ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ ရှောက်သီးတွေကို ရောထည့်ပါ။
= အဖုံးပိတ်ပြီး ၃ ရက်လောက် နှပ်ထားပါ။
ကိုလက်စ်ထရောနဲ့ သွေးတိုးကို ရိုးရိုးလေးနဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင် ပျောက်ကင်းစေတဲ့ ဆေးနည်းကလေးပါ။ ၃ ရက်ကြာတဲ့အခါ ထမင်းစားပြီးတိုင် လက်ဖက်စားဇွန်းနဲ့ တဇွန်း စားရုံပါပဲ။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဆေးအချိန်အဆကို ကိုယ်ခန္ဓာက လက်ခံလာတဲ့အတိုင်း တိုးစားသွားနိုင်ပါတယ်။ အများဆုံးတော့ တနေ့ကို ၅၀ မီလီလီတာပဲ စားရမယ်ဆိုတာ သတိရပါ။
Posted by Eagle News at 11:01 AM No comments:
Republican ရီပတ်ဗလီကင် ၄၂ ရာနှုန်းက သူတို့ပါတီရဲ့ သမ္မတလောင်းဟာ Donald Trump ဖြစ်မယ်လို့ ထင်ကြတယ်။ ၄၃ % ကတော့ ရွေးကောက်ပွဲကြီးမှာ နိုင်ခြေ...
အရူး A mad man
လူတယောက်...... သူ့အိမ်ဘေးက တခြားသူတွေကို ကြည့်နေတယ်။ အလုပ်မလုပ်ဘူး။ စိတ်မငြိမ်ဘူး။ ပြောချင်ရာတွေ လျှောက်ပြောနေတယ်။ အိမ်နီးချင်းတွေက သူ့...
လိုင်ဇာမြို့အဝင်ဝအထိ အစိုးရတပ် သိမ်းပိုက်
News: လိုင်ဇာမြို့အဝင်ဝအထိ အစိုးရပ်တပ် သိမ်းပိုက် - February 1, 2013 Views: ရှောလုမင်းက ဒါဝိဒ်ကို အကြောင်းမရှိ၊ အကြောင်းရှာ အမြဲတိုက...
ကချင်ဆိုတာ ငါတို့ညီအကို Kachin is our brother!
မြန်မာအစိုးရတပ်နဲ့ ကချင် K.I.A တပ်တွေရဲ့ စစ်ပွဲတွေဟာ မဖြစ်သင့်ဘဲ ဖြစ်ရတာမို့ အလွန်စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ။ ဒီထက်ပိုပြီး စိတ်မကောင်းစရာဖြစ်ရတာက...
The Fall of The Roman Republic ရောမအင်ပါယာ ကျဆုံးခန်း
The Roman Republic came to an end when politicians became so self indulged in their own ideologies that they no longer cared about their...
အမေရိကန် သမတ ရွေးကောက်ပွဲ နီးလာတာနဲ့ အကြိ်ုက်တွေ အမျိုးမျိုး ရေးလာကြတယ်။ အကြိုက်မတူတာ သဘာဝဆိုပေမယ့် တချို့ရေးတာတွေက သိပ်စိတ်ပျက်စရာ ကောင...
Foods that Lower High Blood Pressure Unclog Your Blood Vessels and Lower Your Blood Pressure with This Very Simple Solution by Na...
ခရစ်ယာန်သတင်း 2014, Feb
NEWS & VIEWS မြွေကိုင်ပြတဲ့ ဆရာ Feb. 16, 2014 4:35pm နာမည်ကြီး မြွေကိုင်ဆရာတယောက်ဖြစ်တဲ့ Jamie Coots ဟာ မြွေကိုက်ခံပြီးနောက...
Handling Things With Dirty Hands (Burmese)
လက်မဲကြီးနဲ့ လျှောက်ကိုင်သမျှဟာ ညစ်ပတ်နေမှာပဲ အားကစားပြိုင်ပွဲတွေ ကျင်းပတာ ကောင်းပါတယ်။ ကျန်းမာရေးအတွက်...
Goliath: Hoax ဂေါလျ သတင်း အတု
ဂေါလျတ် ဦးခေါင်း ဂေါလျတ်ကြီးရဲ့ ဦးခေါင်းခွံကို တူးဖေါ်တွေ့ရှိပြီဆိုတဲ့ သတင်းဟာ လိမ်လည်ေ...
They still remember! မှတ်မိနေကြဦးမှာပါ
အော့ရ်ှဝဇ် အကျဉ်းထောင်ရှေ့က အနှစ် ၇၀ ပြည့်ပွဲ Auschwitz အကျဉ်းထောင် အနှစ် ၇၀ ပြည့်ပွဲ Auschwits 70 th anniversary Ausch...
သတင်းအမှားတွေကို ဖတ်ရ၊ ကြားရတဲ့အခါ စိတ်ပျက်မိပါတယ်။ တခါ သတင်းတွေအပေါ်မှာ ကောက်ချက်ချ လွဲတာတွေ တွေ့ရတဲ့အခါ စိုးရိမ်မိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီ EAGLE NEWS သတင်းနဲ့ သုံးသပ်ချက် Blog ကို ဖန်တီးရတာပါ။
အာဏာ အကြောင်း - တပိုင်းတစ - (အာဏာ အကွောငျး - တပိုင...